नवराज सिलवालले भने 'कुलमान बाहेकले प्राधिकरण हाँक्न सक्दैन भन्न खोजिँदैछ' - News 88 Post
नवराज सिलवालले भने ‘कुलमान बाहेकले प्राधिकरण हाँक्न सक्दैन भन्न खोजिँदैछ’
August 4, 2021 N88LeaveaComment on नवराज सिलवालले भने ‘कुलमान बाहेकले प्राधिकरण हाँक्न सक्दैन भन्न खोजिँदैछ’
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङबाहेक अरूले हाँक्न सक्दैन भन्ने धारणा जबर्जस्त बनाउन खोजिएको बताएका छन् ।
सिलवालले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो बताएका हुन्।
‘कुलमान असल र व्यवसायिक व्यक्ति हुन् म उनको क्षमता माथि शंका गर्दिन । तर, जुन ढंगले कुलमानबाहेक देशमा अरु कसैले प्राधिकरण हाँक्न सक्दैन भन्ने खालको न्यारेटिभको जबर्जस्त प्रयोग गरिँदैछ, यसले हाम्रा संस्था र प्रणालीलाई असफलतातिर लैजाने छ,’ सिलवालले भनेका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई ल्याउने तयारी थाल्न निर्देर्शन दिएका थिए।
यता, राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा भारतीय एसएसबीहरूकै संलग्नता भएको भन्दै भारतले नेपाली जनतासँग सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले अहिलेसम्मको प्रमाणको आधारमा दार्चुलाका जयसिहं धामी बेपत्ता प्रकरणमा भारतीय एसएसबीहरूको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै यस घटनाको निम्ति भारत सरकारले नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भने,‘म यस प्रकारको अमानवीय, उत्पीडनकारी र क्रूर कार्यको घोर निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दछु। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दछु। दोषी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र अबका दिनहरूमा यस प्रकारका हेपाहा, उत्पीडनकारी व्यवहार अन्त्य गर्न, नदोहोर्‍याउन पनि म जोडदार माग गर्न चाहन्छु।’
सांसद श्रेष्ठले यस प्रकरणले नेपाली जनतामा पीडा पैदा भएको भन्दै पीडाले र देशभक्तिको भावनाले नेपाली जनता आफैं प्रतिकारको स्थितिमा आउन सक्ने चेतावनी दिँदै सरकारले तत्काल सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपाली जनतामा यस प्रकारको अमानवीय, क्रूर, घटनाबाट जुन पीडा पैदा भएको छ। त्यो पीडाले देशभक्तिको बाँध, मानवताविरोधी कार्यविरूद्ध उर्लिएको भावनाले त्यो बाँध भत्काएर आफैं प्रतिवाद र प्रतिकारमा आउने स्थिति उत्पन्न गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल कदम चालोस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख नायक पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए पनि यसको निम्ति विगतदेखिको प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको बताए।
मुलुकको दुरावस्थाको निम्ति ओलीमात्रै जिम्मेवार नभई सबै राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू तथा यसअघि सरकार चलाउनेहरू पनि भएको उनले जिकिर गरे।
यस विषयमा आत्मसमीक्षा गरेर आफूलाई सुधार्दै जानुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रमुख पात्र र नायकत्व पूर्वप्रधानमन्त्री तत्कालीन सरकारका प्रमुख माननीय केपीशर्मा ओलीले नै गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा सत्य हो। तर यो कुरा पनि हामीले आत्मसात् गर्नु जरूरी छ। यो मुलुकको दुरावस्थाका निम्ति, यो मुलुकको बेहालका निम्ति त्यो प्रवृत्तिका वाहक उहाँमात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्थेन। सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, योभन्दा अगाडि विभिन्न ढंगले सरकार चलाउने सरकारहरू पनि एक वा अर्को रूपमा, एउटा वा अर्को हदसम्म जिम्मेवार थिए। आज हामीले त्यो कुरा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आफूलाई सच्याउन हामी तयार हुनुपर्छ।’
सांसद श्रेष्ठले सरकारलाई बाढी पीडितहरूका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन माग पनि गरे।
३३ वर्षीय पारस खड्काले आफू मानसिक रुपमा ५० वर्षको भएँ भन्दै किन लिए सन्यास ?
मैलुङ खोलाको आइपीओ पर्यो ? यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
July 27, 2021 N88